थाहा खबर: चार वर्षभित्र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउँछु : कमल थापा
चार वर्षभित्र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउँछु : कमल थापा
फोटो : दिपक केसी
राप्रपाको एकता महाधिवेशनबाट सोमबार कमल थापा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकीकरण भएपछि पहिलो पटक भएको एकता महाधिवेशनबाट उनलाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष बनाउने प्रमुख नेताहरुबीच सहमति भएपनि उनी सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्न भने सकेनन्। २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा ४ सिटसहितको राप्रपाको अध्यक्ष रहेका थापा पूर्व पञ्चहरुको पार्टीलाई एकत्रित गरी उक्त पार्टीको अध्यक्ष बन्न सफल भए। सोमबार निर्वाचित भएपछि उनका आगामी योजना र प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दामा राप्रपाको धारणाबारे थाहाखबरका लागि शिशिर ढकाल र विकास लम्सालले गरेको कुराकानी :
पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो अब पार्टीलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ?
यो महाधिवेशनले तीनवटा महत्वपूर्ण कार्यभार वा जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ। पहिलो, पार्टीको आदर्श र मान्यतालाई स्थापित गर्ने, दोश्रो पार्टीले अवलम्बन गरेको सिद्धान्तको धरातलमा उभिएर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने। तेश्रो, पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा स्थापित गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने। यो तीनवटा राष्ट्रिय जिम्मेवारी वा कार्यभार पूरा गर्न म आगामी चार वर्ष मेहनत गर्नेछु। नेपालको राजनीतिमा राप्रपाले वैकल्पिक मार्गचित्र र राष्ट्र निर्माणको वैकल्पिक धार निर्माण गरेको छ। यसलाई आम जनतामा पुर्‍याउने र जनताको विश्वास जितेर यो लक्ष्य प्राप्त गर्न म हरसम्भव प्रयास गर्नेछु।
तपाईहरुले संघीयता पनि स्वीकार गर्नुभयो, सँगसँगै राजतन्त्रको मुद्दा लिएर अघि बढिरहनुभएको छ, हिन्दुराष्ट्र पनि छँदैछ। यो सबै मुद्दा लिएर हिँड्ने पार्टी यथास्थितिवादी हो कि अग्रगमनकारी पार्टी हो भन्ने द्विविधा पनि छ। राप्रपालाई कस्तो पार्टी बनाउनुहुन्छ?
यो महाधिवेशनले पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यदिशा निर्धारण गरेको छ। पहिलो कुरा पार्टीले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर जाने नीति अबलम्बन गरेको छ। राप्रपाले आफ्ना फरक मतका बाबजुद यो संविधानलाई स्वीकार गरेको छ। यसर्थ संविधानको परिधिभित्र रहेर संविधानलाई मानेर नै हामी अगाडि बढ्छौं। हाम्रो गतिविधि, क्रियाकलाप संविधान विपरीत हुने छैन। दोश्रो, राप्रपाले जुन विचार प्रस्ताव गरिरहेको छ संघीयता, हिन्दराष्ट्र र राजतन्त्रको सम्बन्धमा यो मध्यमार्गी धार हो। यो नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक परिवेशको सन्दर्भमा उपयुक्त मान्यता हो भन्ने हामीलाई लाग्छ।
संघीयता देशको निम्ति आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो मन्यता हुँदाहुँदै देशको यथार्थ भइसक्यो यो अवस्थामा तुरुन्त संघीयतालाई फर्काउन सक्ने अवस्थामा छैनौं। त्यसैले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्दा न्युनतम क्षति होस्, राष्ट्रिय अस्मितामा आँच नपुगोस्, भन्ने बारेमा सतर्क रहने मध्यमार्गी धार अपनाएका छौं। हिन्दुराष्ट्रको कुरा गर्दा केवल एउटै धर्मलाई राज्यले विशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भनेका छैनौं। सबै धर्मलाई समानता र धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्दै ९४ प्रतिशत जनताको आस्था र पहिचानको रुपमा वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राज्य होस् भन्ने मान्यता हाम्रो छ, त्यो पनि मध्यमार्गी धार हो।
राजसंस्थामा पनि हामीले पहिलेको जस्तो राजसंस्थाको कुरा गरेका छैनौं। परिवर्तनकारीलाई समेत चित्त बुझ्ने ढंगबाट सबैको साझा संस्थाको रुपमा राष्ट्रिय एकता र सांस्कृतिक एकताको प्रतीकको रुपमा राजतन्त्र रहोस्। अहिले मुलुक गणतन्त्रमा गएको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै संविधान अन्तर्गत संसदको परिधिभित्र रहने राजसंस्था हामीले भनेका छौं। यसलाई अझै प्रष्ट रुपमा भन्दा राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र हामीले प्रस्ताव गरेका छौं। हेर्दाखेरि विरोधाभास जस्तो पनि देखिन्छ। तर मलाई यही विरोधाभासबाटै मुलुकको बृहत्तर हितका लागि मध्यमार्गी अवधारणा विचार मान्यता स्थापित गर्न सक्छौं। नेपालको सन्दर्भमा यो नै मौलिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
राप्रपा अहिले सत्ता साझेदार दल पनि हो। संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अहिले बिभिन्न मुद्दा पनि आएको छ। यस्तो अवस्थामा राप्रपाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ?
संविधान कार्यान्वयनमा हामी रचनात्मक सहयोग गर्छौं। फरक मतका बाबजुद हामीले संविधान निर्माणमा रचनात्मक सहयोग पुर्‍यायौं। अब कार्यान्वयनमा पनि सकारात्मक सहयोग पुर्‍याउँछौं। निश्चय पनि हाम्रा केही फरक एजेन्डा छन् तथापी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रचनात्मक सहयोग हुनेछ। अहिले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकका केही दफामा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। मधेसका समस्या समाधान गर्नुपर्छ र मधेसी दललाई विश्वासमा लिएर नै चुनावमा जानुपर्छ। तर संशोधन विधेयक यथास्थितिमा अघि बढाए हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं।
तपाईंले परिवर्तनकामी शक्तिलाई पनि राजसंस्थाको मुद्दामा ल्याउन भनेर महाधिवेशको उद्घाटन कार्यक्रममा पनि प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यसका लागि के पहल गर्नुहुन्छ?
अहिले त हामीले अवधारणामात्र प्रस्तुत गरेका छौं। यो अवधारणा मुलुकको बृहत्तर हितमा छ। अब यसबारेमा राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गर्नुपर्छ। जनताको माझमा पनि अनुकुल जनमत सिर्जना गर्ने पक्षमा छौं। हामी नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छौं, हामी परिवर्तका विरोधी होइनौं। तर निरन्तरता सहितको परिवर्तन दिगो हुन्छ, देशको हितमा हुन्छ। त्यसकारण निरन्तरता कायम राखौं, परम्परागत संस्थालाई मान्यता दिऔं। खासगरी राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतासँग सरोकार राख्ने संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर र त्यसलाई उपयोग गरेर अघि बढ्नु वुद्धिमानी हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।
तपाईको अवधारणा अरु दलले स्वीकार गर्छन् भन्ने विश्वास छ?
समय लाग्न सक्छ, तर त्यसको निम्ति हामी प्रयास गर्छौं।
१२ वर्षमा खोला त फर्किन्छ भनिन्छ, यो धार पनि परिवर्तन होला त?
धारलाई पछाडि फर्काउने भनेको होइन, अगाडि नै जाने हो। अगाडि धार लैजाँदा सामान्जस्यता राखौं। आखिर सबै नदीको संगमस्थल समुद्र हो। समुद्रमा पुग्दा फरक धार भएर होइन एउटै धार भएर जाउँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
१० वर्षअघिसम्म अरु राजनीतिक दलका नेताहरु तपाईको नाम लिन पनि हिचकाउँथे। तर महाधिवेशन उद्घाटनको दिन तपाईको प्रशंसा नै गरे। यो अवस्था कसरी आयोजस्तो लाग्छ?
फरक मतका बाबजुद हाम्रो पार्टीको सिद्धान्तिप्रतिको अविचलित निष्ठा नै मुख्य कारण हो। जसले पनि विहान एउटा कुरा, बेलुका एउटा गर्ने। वा सिद्धान्तबाट विचलित हुने, सिद्धान्तमा भ्रम रहने व्यक्ति वा पार्टीसँग सहकार्य गर्न अठेरो हुन्छ। तर राप्रपा आफ्नो मान्यतामा प्रष्ट छ। यो कुरा सबैलाई थाहा छ। प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर, बाबुराम भट्टराईजीहरुसँग कुरा गर्दा भन्नुहुन्छ कि तपाईहरुको धारणा, अडान स्पष्ट छ। मुलुकको बृहत्तर हितका निम्ति आफ्ना मान्यता फरक हुँदाहुँदै सहकार्य गर्न सक्छौं।
राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्न सक्छौं भने के विवाद छ? फेरि संविधान यस्तो धरातल हो जहाँ हामी एक ठाउँमा उभिएका छौं, यो संविधान मानेर जाऔं न, यो संविधानले फरक विचार लिएर अघि बढ्ने स्वतन्त्रता सबैलाई दिएको छ। आवधिक निर्वाचनमा गएर आफ्नो विचार स्थापित गर्ने अधिकार पनि दिएको छ भने के को झगडा भयो? आफ्नो आफ्नो विचार लिएर अघि बढौं, देशको विकासका निम्ति, राष्ट्रलाई संङ्कट परेका बेला एक ठाउँमा उभिऔं। राष्ट्र निर्माण कसरी गर्ने भन्ने फरक फरक विचार होला। तर राष्ट् निर्माण गर्ने कुरामा हामी एकमत छौं। त्यसैले मिलेर जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
तपाई राप्रपा नेपालको मात्र अध्यक्ष हुँदा पनि तपाईमाथि अधिनायकवाद थोपरेको आरोप लागेको थियो। राप्रपाको यो महाधिवेशनको बन्दशत्रमा पनि तपाईले आफ्नो विरोध गर्नेलाई बाहिर निकाल्न निर्देशन दिनुभयो भन्ने सुनियो। के तपाईले फेरि पार्टीभित्र अधिनायकवाद लाद्न खोज्नुभएको हो?
(हाँस्दै) यो विल्कुल अतिरन्जित ढंगबाट फैलाइएको प्रचार हो। वास्तवमा त्यहाँ कुनै घटना भएको होइन। छलफलको क्रममा आफ्नो ठाउँमा बसेर विचार राख्नुपर्नेमा मञ्चको नजिक आएर होल्लला गर्न थालेपछि आफ्नो ठाउँमा जानुस् भनेको हुँ। बाहिर जे प्रचार प्रसार गरियो त्यसमा सत्यता छैन। मेरो चाहना भनेको पार्टीमा आन्तरिक प्रजातन्त्र सुदृढ गर्ने, विधि र प्रक्रिया अनुसार अनुसार पार्टी चलाउने, आर्थिक कारोबार पारदर्शी ढंगले अघि बढाउने हो। पार्टीका वरिष्ठ नेता र महत्वपूर्ण नेतृत्वसँग सामन्जस्यता कायम गरेर अघि बढ्ने प्रयास हुन्छ।
हामी एउटा महत्वपूर्ण संकल्प बोकेर हिँडेका छौं। यस्तो अवस्थामा विभाजित भएर लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन। पार्टीभित्र आन्तरिक एकता कायम राख्ने हरसम्भव प्रयास हुन्छ। पार्टी अगाडि बढाउन आन्तरिक प्रजातन्त्र र विचार स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्छ। तर स्वच्छन्दताले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ। हामीले अन्य पार्टी पनि देखेका छौं। विचारमा स्वतन्त्रता हुन्छ तर पार्टीले निर्णय गरेपछि त्यसलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ। बाहिर गएर पार्टीभित्रको विवाद छताछुल्ल पार्नु हुँदैन। विचार व्यक्तिको हुन्छ, निर्णय समूहको हुन्छ। त्यही आधारमा चल्नुपर्छ। म त्यही आधारमा चलाउँछु त्यसमा समस्या हुँदैन।
नयाँ संविधान अनुसार मुलुक तीनवटै तहको चुनावको तयारीमा छ। तीन तहको चुनावमा राप्रपाको रणनीति के हुन्छ? कसरी तयारी गर्नुहुन्छ?
भोलिदेखि नै हामी चुनावको तयारीमा लाग्छौं। तीन तहको चुनाव तोकिएको समयमा हुनुपर्छ। हामी चुनावको मिति घोषणालाई समर्थन र स्वागत गर्छौं। चुनावका निम्ति तयारी पनि गर्छौं। मधेस केन्द्रित दलको विस्वास जित्ने काम गर्नुपर्छ। जहाँसम्म पार्टीको प्रश्न छ, भोलिदेखि हामी चुनावको तयारीमा लाग्छौं।